Selva de Oza, dabeecadda iyo dalxiiska | Wararka Safarka
Waan sii wadaynaa qorshaheena dalxiiska banaanka, cirka hoostiisa, taabashada dabeecadda iyo buuraha dhexdooda. Maanta waa markiisii Kaymaha Oza, meel ku taal gudaha La Jacetania Western Valleys Park Dabiiciga ah.
Waa meel qabow in la sameeyo socodka, fuulitaanka, curyaaminta ama barafka xilliga qaboobaha. Ka waran? Aynu wax badan ka ogaanno Selva de Oza.
Selva de Oza iyo La Jacetania
La Jacetania waxay ku taal Aragon, inta u dhexeysa Zaragoza iyo Huesca, Spain. Jasiiradaha loo yaqaan "The" Pyrenees "ee loo yaqaan 'Atlantic Pyrenees' waa xadka dabiiciga ah ee ay la wadaagaan Faransiiska, halka ugu sarreysa ee ay halkaan joogtana waa mid dhererkeedu yahay 2886 mitir, sidaa darteed, barafka ayaa dhalaalaya waxaanan ka helaynaa mid ka mid ah meelaha ugu da'da weyn ee lagu ciyaaro barafka ee Isbaanishka, haddii aanu ahayn kan ugu da'da weyn.
Beerta Dabiiciga ah ee Dooxooyinka Galbeed ee La Jacetania waxaa la aasaasay bishii Diseembar 2006 iyo sidii aan bilowgiiba nidhi, gudaha waxaa ku yaal Selva de Oza. Dhab ahaantii aagga oo dhan ayaa mudan in la booqdo maxaa yeelay waa soo jiidasho. Waxaad higsan kartaa inaad barato magaalada Hecho, Siresa iyo gurigeeda iyo halkaas oo aad ka bilowdo inaad gasho Selva de Oza, inta udhaxeysa buuraha iyo keymaha cufan.
Haddii aad raacdo gaari waad dhigan kartaa mid kasta oo ka mid ah saddex meelood oo baabuurta la dhigto waxa jira oo meeshaas ka daawo waxa nooca dalxiisyada Waad ku samayn kartaa iyadoo loo eegayo cimilada ku jirta booqashadaada. Mid, kan hore, wuxuu kujiraa Xarunta Turjumaada Megalithic Pyrenean, tan labaadna waxay kujirtaa xerada Ramiro el Monje kan ugu dambeyna wuxuu kujiraa wadada Guarriza.
Saddexdaa goobood waxaad kala dooran kartaa dhowr wado. Tusaale ahaan, midka hore, mid ka mid ah jidadka lagu taliyay waa midka raacaya wadada roman gabow kaas oo ka gudbaya qulqulka Boca del Infierno, waadi qurux badan. Wadada lafteedu waxay u egtahay goobo oo waxay isku dherer tahay wadar ahaan laba iyo toban kilomitir.
Xaaladda baarkinka labaad waxaad raaci kartaa Wadada Peña Forcá iyo Estribiella oo ku milmaya geed geed geedo beech ah, beech iyo fir. Waa mudan tahay in xoogaa la fuulo, qiyaastii laba kiiloomitir, maxaa yeelay waxaad gaartaa dhul-beereed qurux badan oo leh aragti weyn oo ah massif rincón de Alanao iyo Peña Forcá.
Ugu dambayntiina, haddii aad go’aansato inaad tagto halka ugu dambeysa ee baabuurta la dhigto, waxaad qaadi kartaa laba waddo, mid midigta iyo mid bidixda ah.
Haddii aad midigta midig ka qaadatid waxaad gaari doontaa waddada loo maro Aguas Tuertas Valley iyo Ibbon de Estanés, oo dhererkiisu ka yar yahay kiilomitir iyo badh. Waxaad leedahay seddex kiiloomitir oo ugu horeyn fudud iyo wixii ka dambeeya Dooxada Aguas Tuertas, haddii aad sii wado shan kilomitir oo dheeri ah oo aad ka gudubto, waxaad gaari doontaa Ibon de Estanés. Haddii aad qaadatid midka bidix, waxaa jira waddo jiingad ah oo shan-kilomitir ah oo toos kuu geynaysa Ibon.
Aagga oo dhan waa a goob gaar ah oo loogu talagalay fuulitaanka laakiin dhab ahaan haddii aadan ahayn, sidoo kale waad baashaali kartaa Tusaale ahaan, waxaa jira Kaymaha Oza iyo iyaga khadadka zip iyo dheelitirka ciyaaraha. Waxay ku taalaa badhtamaha kaynta beech, geedaha iyo geedaha berooshka ah oo aan jirin waddo keliya laakiin sideed dhibaatooyin kala duwan leh, dhammaantoodna u wada dhan webiga. Oo waxaa jira carruurta, oo leh boodboodayaal, khadadka siibka ee gaarka ah iyo ciyaaro kale, iyo dadka waaweyn ama carruurta da'doodu ka weyn tahay sagaal sano oo leh aalado dhaadheer, khadadka dhaadheer ee dhejiska ah, rabosa, kala-baxa iyo dabaqadaha dhererka kala duwan.
Xusuusnow in hareeraha halkan dhererkoodu ka badan yahay laba kun oo mitir oo dhexdooda ay ku jiraan hoy adhijirro, oo degaanka looga yaqaan xuduudaha, laakiin inaad ka faa'iideysan karto inaad joojiso inaad wax cuntid. Oo weli waa jiraa dalxiisyada Maxaad qaban kartaa.
Tusaale ahaan, waad baran kartaa Raadinta ragga Neolithic ee Aguastuertas, 1600 mitir sare. Waxaad ka timid Selva de Oza oo ka gudbeysa Dooxada Guarrinza xitaa waad arki doontaa dolmen inay halkaas uga tageen shan kun oo sano ka hor. Nasiib wanaagse maahan kaliya burburka megalithic ee ku xeeran halkaan, sida qadiimiga qadiimiga ahi horeyba uga heleen 80, inbadan oo isla aagaga ah.
In kastoo dolmen kii ugu horreeyay u dhow yahay xerada Ramiro el Monje Waxaa jira kuwo kale oo ka tirsan Taajka Dhimashada, Meel sare, wareegyo dhagax ah oo u dhexeeya toddobo ilaa shan kun oo sano, tusaale ahaan. Waxa kale oo jira afar kale oo u dhexeeya Casa de la Mina iyo El Barcal dooxada, in ka badan 1200 mitir. Waxa kale oo jira tuulmooyin aaska, the Camón de las Fitas, oo leh wadiiqo. Waxay u muuqdaan kuwo sixir ah.
Sidaad u aragto, hawdka Oza wuxuu bixiyaa waxyaabo kala duwan oo xiiso leh. Ku socodka, Sida iska cad, waa nidaamka maalinta sidaa darteed waxaad ku dhex mari kartaa wicitaanka Wadada Camille, oo lagu dhejiyay muuqaal qurux badan iyo aragtiyo dhaadheer oo ugu sareeya aagga. Haddii aad wax badan jeceshahay, waxaan kuu sheegayaa in safarka oo dhan uu yahay lix maalmood, wuxuu u sii gudbayaa dhinaca Faransiiska nasiib wanaagna wuxuu leeyahay gabaadyo oo dhan.
Oh, oo ha iloobin waxa ku saabsan magaalooyinka aad booqan karto kahor imaatinka Selva de Oza habboon: La qabtay iyo Siresa. Waxaad imaaneysaa Done oo ku taal wadada A-176 taas oo barbar socota wabiga Aragón. Waa meel yar oo qurux badan, oo leh jidad yar oo dhagax ah iyo guryo ka sameysan alwaax.
Waxaad imaaneysaa Siresa adoo raacaya isla wadada waxa ugu muhiimsanina waa iyada keniisad duug ah taas oo u weyn sida tan Jaca Cathedral. Waxay ka timid qarnigii XNUMXaad kaniisadeeduna waa mid fudud laakiin qurux badan.
Si loo dhammeeyo, haddii sheygaagu runtii ka sii fuulayo socodka, waxaa jira degello internet oo Isbaanish ah oo si gaar ah uga hadlaya safradan, maraya ferratas, noocyada, darajooyinkooda cillad farsamo, gobolka, nooca marinka iyo kuwa kale. Hubi kahor intaadan imaan inaad diyaarsato. Haddayna taada kaliya ku soconaynin inta u dhexeysa buuraha iyo geedaha, cirka hoostiisa, keligaa, lamaane ahaan ama carruur ahaan, markaa ha u istaagin inaad si isku mid ah u socoto.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka Safarka » Getaways Yurub » Espana » Selva de Oza, dabeecadda iyo dalxiiska
Jimcaha Madow: 4 maalmood oo Malta ah qiimaha ugu fiican